Myanmar Defence Weapons: April 2012
မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံဟာ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာမှာ ကျွှမ်းကျင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်... အနောက်နိုင်ငံနှင့် ရုရှား၊တရုပ်စသည့် နိုင်ငံကြီးများသာမက ဂျပန်၊တောင်ကိုးရီးယားစသည့် နိုင်ငံများကဲ့သို့ပင် ခေတ်မှီတင့်ကားကြီးများကို ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်...။
၂၀၁၂ခုနှစ် မြောက်ကိုးရီးယားစစ်ရေးပြပွဲအတွင်းမှာ ပြသသွားခဲ့တဲ့ တင့်ကားတချို့ဟာဆိုရင် စစ်ရေးစိတ်ဝင်စားသူများအတွက် လေ့လာအကဲခတ်ချင်စရာ အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်...
စစ်အေးခေတ်ကာလတွင် ဆိုဗီယက်နိုင်ငံမှ ခေတ်မှီ တီ-၆၂ ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်ကားများ ရရှိခဲ့ပြီး ထိုခေတ်အချိန်ခါကမူ ခေတ်မှီတင့်ကြီးများ အဖြစ်နာမည်ကျော်ကြားသည်။ ထို့နောက် အဆိုပါ တီ-၆၂ တင့်များအား လေ့လာခဲ့ပြီး မိမိတို့ပြည်တွင်းတွင်ပင် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ခဲ့စေရာ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ပင် တင်ပို့ရောင်းချနိုင်သော အဆင့်ရောက်ခဲ့သည်။ တီ-၆၂ ပုံစံအား ပုံတူယူ၍ထုတ်လုပ် ထားသော တင့်များကို Chonma-Ho (မြင်းပျံ) ဟူသည့် အမည်ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။
ဒီတင့်တွေဟာ ရုတ်တရုက် ကြည့်လိုက်ရင် Pokpong-Ho တင့်တွေနှင့် ဆင်တူပင်မဲ့ တင့်ကားရဲ့ ဘီးတွေကို ကြည့်ချင်အားဖြင့် မဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရမှာပါ... ဒီတင့်ရဲ့ ERA တပ်တဲ့ ပုံစံကတော့ တမျိုးပါ....။
ERA စနစ်သစ်ပါ ကျွှန်တော်လေ့လာမိသလောက်ကတော့ ဒီလို ERA စနစ်ကို ပထမဆုံးတွေ့ဘူးတာပါဘဲ ဆိုဗီယက်နိုင်ငံဟောင်းတချို့မှာ တီ-၇၂တွေကို ဒီလိုပုံစံ ERA တပ်တာတွေ့ဘူးပင်မဲ့ အနည်းငယ်တော့ ကွဲပြားမှုရှိပါတယ်....။
တန်ချိန် (၄၀)တန် ရှိပြီး စစ်သည် ၄ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းမောင်းနှင်သော အဆိုပါတင့်ကားများတွင် ၁၁၅မမ တင့်အမြောက်များ တပ်ဆင်ထားပြီး ၁နာရီတွင် ၅၀ ကီလိုမီတာ ဖြင့် မောင်းနှင်က ခရီးအကွာအဝေး ၄၅၀ကီလိုမီတာအထိ စစ်ဆင်မောင်းနှင် နိုင်စွမ်းရှိသည်။ (နောက်ပိုင်းတွင် အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ ပြုလုပ်ကာ ကီလိုမီတာ ၆၅ အထိ မောင်းနှင်နိုင်သည်ဟု သိရပါသည်။)
လေ့လာမိတဲ့ အချက်လက်တွေဘဲ ဖြစ်တာမို့ ၁၀၀% မှန်တယ်မဆိုနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ... ဆက်စပ်တဲ့ သတင်းတွေ ပုံတွေရခဲ့ရင်လည်း ဆက်တင်ပေးပါ့မယ်...။
ဆက်လက် လေ့လာလိုပါက-- Chonma-Ho ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်ကားများ
Posted by MM at 11:26 PM 1 comment:
Kh-35 (SS-N-25) ဒုံးလက်နက်စနစ်ပါ အောင်ဇေယျ ဖရီးဂိတ်ကြီး
မြန်မာ့တပ်မတော်ရေထုတ် အောင်ဇေယျ ဒုံးတပ်ဖရီးဂိတ် စစ်ရေယာဉ်ကြီးသည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအပြင် နိုင်ငံတကာရှိ စစ်ရေးလေ့လာသူတိုင်းက စိတ်ဝင်စားနေသော ခေတ်မှီစစ်ရေယာဉ်ကြီးဖြစ်ပါသည်...။
အောင်ဇေယျ စစ်ရေယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ဒုံးလက်နက်စနစ်
ရုရှားရေတပ် စစ်သင်္ဘောပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော စနစ်
Kh-35 (SS-N-25) သဘောင်္ဖျက် ဒုံးကျည် (အမျိုးစားမူကွဲများ ရှိပါသည်။)
အောင်ဇေယျ ဖရီးဂိတ်စစ်ရေယာဉ်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော
ခေတ်မှီလက်နက်များအနက် ရေပြင်မှရေပြင်ပစ် (သဘောင်္ဖျက်ဒုံး)မှာ ရန်သူ့မည်သည့် စစ်ရေယာဉ်အမျိုးစားကို မဆိုပစ်ခတ်ချေမှုန်းနိုင်သော ရုရှားနိုင်ငံထုတ် Kh-35 (SS-N-25) SSM ဒုံးအမျိုးအစားများ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဒုံးလက်နက်စနစ်သည် အကွာအဝေး ကီလိုမီတာ ၂၈၀ အထိပင် တိကျစွာပစ်ခတ်ချေမှုန်းနိုင်စွမ်းရှိပြီး အောင်ဇေယျ စစ်ရေယာဉ်ပေါ်တွင် ဒုံးကျည် ၄စင်းတပ်ဆင်ထားပါသည်။ (နောက်ပိုင်းတွင် တဖက်တချက်ဆီတွင် ဒုံးကျည် ၄စင်းဆီထပ်မံတပ်ဆင်ပေးနိုင်ပါက ရေယာဉ်၏ စွမ်းရည်မှာ သိသိသာသာ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။)
Kh-35 ဒုံးစနစ်ကို လက်ရှိဒေသတွင်းနိုင်ငံများ အနေဖြင့် အိန္ဒိယ နှင့် ဗီယက်နမ်ရေတပ်တို့မှ အသုံးပြုထားသည်။
ခေတ်မှီ ပြည်တွင်းထုတ် စစ်ရေယာဉ် (ဗီယက်နမ် ရေတပ်)
SS-N-25 ဒုံးလက်နက်စနစ်၏ အချက်လက်များ
Switchblade, 3M24 Uran
145 kg HE, SAP
Turbofan w/ solid booster
INS, active radar, GPS
The SS-N-25 “Switchblade” (3M24 Uran) isashort-range, ship-launched, turbofan-powered, single-warhead, surface-to-surface cruise missile developed and manufactured by Russia.
The Zvezda-Strela OKB (now Tactical Missile Corporation) began developing the SS-N-25 “Switchblade” missile in 1983. It was originally intended asasurface-to-surface missile for ship and coastal launch, and an export replacement for the SS-N-2 “Styx” missiles. The ship-launched version is known as the SS-N-25 “Switchblade” (3M24 Uran) and the ground-launched coastal defense version as the SSC-6 “Stooge” (3K60 Bal). An air-launched version, the AS-20 “Kayak” (Kh-35), was added later.
The SS-N-25 “Switchblade” (3M24 Uran) is similar in appearance to the U.S. RGM-84 “Harpoon.” It has four triangular wings at mid-body, and four triangular moving control fins at the rear. The missile is 4.4 m in length, hasabody diameter of 0.42 m, and hasalaunch weight of 630 kg. Midcourse guidance is provided by an inertial navigation system (INS), with an active radar in the terminal phase. The missile is powered byasolid propellant boost motor andaturbofan engine withacruise speed of Mach 0.8. The missile hasarange of 130 km and carriesa145 kg high explosive semi-armor piercing warhead.
Sources indicate that the SS-N-25 “Switchblade” entered service 1993. It is deployed on “Nanuchka 4” (Project 1234.2) class corvettes, modified “Krivak 1” (Project 1135) class frigates, and “Neustrashimy” (Project 1154) and “Gepard” (Project 11661) class frigates. Russia also plans to deploy the SS-N-25 on “Steregushchiy” (Project 20380) class frigates, and to offer the missile for export fitted to “Scorpion” (Project 12300) class corvettes and several classes of fast attack craft. The SS-N-25 is stored and launched from pressurized 3C34 containers, grouped in pairs of four. The export version is known as the 3M24E Uran E.
Russia has also developed an improved version of the SS-N-25 “Switchblade”/ SSC-6 “Stooge” known as the 3M24M. It incorporates GPS or Glonass updates, carries more fuel, and has an increased range of 250 km. Its launch weight is increased to 700 kg, and the missile is believed to be longer than the standard version (perhaps 5.4 m in length). Russia offered this version for export in 1997 as the 3M24E1 version.
The SS-N-25 missile has been exported to India for use aboard Delhi-class destroyers, Kora-class corvettes, Brahmaputra-class frigates, and possibly other craft as well. An initial order for 100 missiles was placed by India in 1997. Also in 1997, Russia exported SS-N-25 missiles to Vietnam for use aboard their Ho-A class fast-attack craft. It was originally believed that Algeria ordered 96 SS-N-25 missiles in 1998, but subsequent reports have suggested that Algeria ordered the air-launched variant AS-20 "Kayak."
Posted by MM at 10:52 PM No comments:
မြန်မာ့တပ်မတော် အမြောက်တပ်ရှိ အမြောက်ဆွဲယာဉ်
မြန်မာ့တပ်မတော် အမြောက်တပ်ရှိ အမြောက်ကြီးများအား သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် ခေတ်မှီအမြောက်ဆွဲယာဉ်ကြီးများ အသုံးပြုလျက်ရှိရာ ယခုပုံတွင်တွေ့ရသော ယာဉ်များမှာ တရုပ်နိုင်ငံထုတ် Shaanqi SX2190 ယာဉ်ကြီးများဖြစ်ပါသည်။
SX2190 Heavy Trucks Specifications
Seating: 1+3 (or 1+1 with one bed)
Weight (laden, road): N/A
Weight (laden, off-road): 18,500kg
Weight (unladen): 11,500kg
Max load (off-road): 7,000kg
Max load (road): 10,000kg
Max towed load: 10,000kg
Wheel base: 3.375m / 1.400m
Track (front/rear): 2.072m / 2.072m
Ground clearance: 385mm
Fuel tank capacity: 400 litres
Turning radius: 9m
Tyres: 15.5X20, 18 plies nylon
Posted by MM at 5:48 PM No comments:
မြန်မာ့တပ်မတော် အောင်ဇေယျ ခြေလျင်၊တင့်နှင့် အမြောက် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း
Posted by MM at 11:49 AM 1 comment:
တပ်မတော် သံချပ်ကာ ယန္တာရားတပ်ရှိ သံချပ်ကာနှင့် တင့်ကားများ
အောင်ဇေယျ ဒုံးတပ် ဖရီးဂိတ် စစ်ရေယာဉ်ကြီး (ရေတပ်သင်္ဘောကျင်းထုတ်)
Posted by MM at 10:25 PM 1 comment:
မြန်မာ့တပ်မတော် သံချပ်ကာယန္တာရားတပ်ဖွဲ့များရှိ ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်ကားကြီးများ ဖြစ်ပါသည်။
(ဒီပိုစ့်ပြီး နောက်ထပ်တင်ဖို့အတွက် မသေချာသေးပါ ခရီးသွားစရာရှိလို့ပါ ခင်ဗျာ.... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။)
Posted by MM at 12:57 PM6comments:
တပ်မတော်ရှိ ၁၀၅မမ တင့်ဖျက်ယာဉ်များ
ပုံစံ-၈၇ ၁၀၅မမ တင့်ဖျက်ယာဉ်မှ စမ်းသပ်ပစ်ခတ်နေစဉ်
ပုံစံ-၉၂ လူစီးသံချပ်ကာယာဉ်ပေါ်တွင် ၁၀၅မမ တင့်ဖျက်အမြောက်တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ရာ တပ်မတော်မှ အထူးဝယ်ယူရန်မလိုတော့ဘဲ မူလရှိနေဆဲ သံချပ်ကာယာဉ်များအားဖြင့် နည်းပညာရယူကာ ပြည်တွင်းတွင်ပင် အမြောက်တပ်ဆင်နိုင်မည်ဟု ယူဆရပါသည်...။
Type-87 105mm Tank Destroyer
တပ်ဆင်ထားသည့် လက်နက်စနစ်....... ၁၀၅မမ (၃၆ကျည်)၊ ၁၂.၇မမ ( ၅၀၀ကျည်)၊ ၇.၆၂မမ (၂၀၀၀ ကျည်)
(တပ်မတော်မှ တင့်ဖျက်ယာဉ်ကို မြင်ဘူးတာ ဒါပထမဆုံးပါဘဲဗျာ... ပုံတွေကို အသုံးပြုခွင့်ပြုလို့ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ...။)
Posted by MM at 11:51 AM2comments:
MBT-2000 Tanks of Myanmar Army
မြန်မာ့တပ်မတော် သံချပ်ကာယန္တာရားတပ်များတွင် အသုံးပြုသော ခေတ်မှီ MBT-2000 ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်ကားများအား စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နေစဉ် ဖြစ်ပါသည်။ MBT-2000 တင့်ကားများကို တရုပ်နိုင်ငံမှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်းတွင် ဝယ်ယူရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တပ်မတော်၏ နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မှီတင့်ကားကြီးများ ဖြစ်လာသည်...။
MBT-2000 တင့်ကားကြီးများကို ယခုအချိန်တွင် ပီရူးနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူထားပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့်မှ ၄၄စင်း ဝယ်ယူရန်စာချုပ်ချုပ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါသည်...။
တပ်ဆင်ထားသည့် လက်နက်စနစ်........ ၁၂၅မမ (၃၉ကျည်ပါ)၊ ၁၂.၇မမ (၅၀၀ကျည်ပါ)၊ ၇.၆၂မမ (၃၀၀၀ကျည်ပါ)
အမြန်နှုန်း......... ၆၅-၇၂ ကီလိုမီတာ (တစ်နာရီတွင်)
ဒီတင့်တွေတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ သေချာပါပြီခင်ဗျာ..... ဆက်စပ်တဲ့သတင်းလေးတွေလည်း ရေးပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေဗျာ.....။
Posted by MM at 2:44 AM3comments:
Kh-35 (SS-N-25) ဒုံးလက်နက်စနစ်ပါ အောင်ဇေယျ ဖရီးဂိတ...
မြန်မာ့တပ်မတော်ရှိ T-72S Main Battle Tanks
လေတပ်ရှိ အမ်အိုင်-၃၅ပီ တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်များ
တပ်မတော် အမြောက်တပ်ရှိ ၁၀၅မမ အမြောက်များ
Myanmar Armour Corps BTR-3U APCs
Myanmar Armour Corps Type-59D MBTS